1दर्ता XBET | 1xBet Login SN | Inscription sur 1XBet pour le Sénégal
1दर्ता XBET – 1xBet लगइन sn
बस राम्ररी प्रत्येक वर्णन पालना र दर्ता प्रक्रिया प्लेयर लागि समस्या छैन!
चरण 1 - एक साँचो वेबसाइट फेला
सबै को पहिलो, कम्प्युटर वा स्मार्टफोन लिन, कि सूट यदि तपाईं सबै भन्दा राम्रो. अब, आधिकारिक वेबसाइट 1xBet सेनेगल तपाईंको मनपर्ने खोज इन्जिन प्रयोग. तपाईं एन्ड्रोइड स्वामित्व भने, यो अनलाइन मुख्य खोज इन्जिन रूपमा Google प्रयोग गर्न बेहतर छ. तपाईंले चाहेको लिंक फेला, क्लिक गर्नुहोस्. पक्का सही वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस्, किनभने धेरै ठगी गलत जान तयार कम्पनीहरु छन्.
चरण2- 1xbet दर्ता
त्यसपछि, तुरुन्तै यो बटन क्लिक गर्नुहोस् स्वतन्त्र महसुस. एक पटक तपाईँले गरेका, एक नयाँ विन्डो खोल्न हुनेछ. एक नयाँ विन्डो "दर्ता" धेरै क्षेत्रहरू सँग खुल्छ. माथिल्लो बायाँ कुनामा, तपाईं निम्न पाउनुहुनेछ - दर्ता आज र तुरुन्तै बोनस प्राप्त!
एक पटक, तपाईं आधिकारिक वेबसाइट खोल्न व्यवस्थित छन्. Trouvez le bouton « Inscription » – un gros bouton vert dans le coin supérieur droit, जडान बटन 1xBet अर्को. ठाउँ पेरिस गर्न, बोनस आदान प्रदान र पैसा झिक्न, तपाईं व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्छ.
एक झन्डा क्षेत्र. यहाँ, तपाईं आफ्नो देश चयन गर्न र आफ्नो मोबाइल फोन प्रविष्ट गर्नुहोस्. नाम. बस, यो क्षेत्रमा आफ्नो नाम टाइप. पासवर्ड. बलियो पासवर्ड विचार, अक्षर र नम्बर समावेश. जो कोहीले आफ्नो पासवर्ड दिन छैन, तपाईं आफ्नो खाता गुमाउन सक्छ. प्रचार कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्. यो क्षेत्रमा, ड्रपडाउन सूचीबाट आफ्नो रुचि मुद्रा चयन.
एक पटक, तपाईं सबै आवश्यक जानकारी प्रविष्ट गर्न सकियो. तपाईं सबै सही प्रविष्ट गर्नुभएको डबल चेक, र प्रेस ठूलो बटन हरियो "सुरक्षित गर्नुहोस्". तपाईं पनि मोबाइल संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
यो 1xbet लागि दर्ता पछि बोनस प्राप्त हुनेछ त्यो भन्नाले, तपाईं ठीक गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. अब ध्यान दिएर दर्ता फारम भर्न. यो साँचो डाटा टाइप गर्न राम्रो छ भनेर सम्झना. तपाईं गलत नाम र थर प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि, तपाईं पैसा निकासी समस्या र जाँच खाता हुन सक्छ.
चरण3- सफलतापूर्वक साइन अप 1xbet
गृह बटन 1xBet प्रेस, तपाईं वा गृह पृष्ठमा छैनन् भने, 1xBet मेनु वा माथि दायाँ कुनामा लगइन बटन खोज्दै. एक लग इन 1xbet र पासवर्ड स्वतः तपाईंलाई नियुक्त गरिनेछ
बाहिर हेर्न, रेकर्ड बटन 1xBet क्लिक गर्नु अघि, यो कम्पनी को नियम र सर्तहरू पढ्न भन्दा राम्रो छ. ऋण ? अन्तमा, प्रेस! बधाई, तपाईं व्यक्तिगत खाता सिर्जना र तपाईं अब जडान बटन 1xBet सेनेगल प्रेस गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ.
चरण4- लग 1xbet
एक पपअप विन्डो मा, तपाईंको ई-मेल ठेगाना वा दर्ता आईडी प्रविष्ट गर्नुहोस् (1xbet लग इन) र तल क्षेत्रमा आफ्नो पासवर्ड. Cochez la case « Remember me » si vous souhaitez que votre moteur de recherche retienne les informations saisies. यसरी, जडान प्रक्रिया 1xBet समयमा, तपाईँले गर्नुपर्ने छैन पुन प्रविष्ट.
कसरी को गरिन दर्ता र आफ्नो बोनस 1xbet दावी
अन्यथा, बटन क्लिक गर्नुहोस् “रेकर्ड” वेबसाइटको माथिल्लो दाहिने कुनामा एउटा पपअप प्रदर्शन गर्न4विकल्पहरू गरिन दर्ता, Dont2माथि. सी गरिन गरिन को विधि संग संलग्न प्रक्रिया छ; दर्ता
एक क्लिक मा दर्ता
आफ्नो देश चयन
आफ्नो मुद्रा चयन
को प्रोमो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्
बटन बचत क्लिक गर्नुहोस्
हे गरिन रजिस्टर 1xbet धेरै सरल छ. जब तपाईं पृष्ठ गरिन मा आइपुग्दा; स्वागत, भनेर 1xbet दुई तरिकामा मा दर्ता गर्न अनुमति दिन्छ दाँया मा लेखिएको; तपाईं गरिन र एक रूप पाउनुहुनेछ. दर्ता द्रुत दर्ता र 1xbet 1xbet आधारित फोन नम्बर.
यो नयाँ जानकारी त्यसपछि आफ्नो खाता जडान र आफ्नो प्रोफाइल पछि परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. अब तपाईं गरिन बचत गर्न सक्नुहुन्छ; पैसा र सट्टेबाजी सुरु.
निम्न विन्डो आफ्नो खाता नम्बर र पासवर्ड देखाउन प्रकट. त्यहाँ गरिन रूपमा पृष्ठ बचत गर्न धेरै विकल्प छन्; छवि, ई-मेल खाता आफ्नो नव सिर्जना फारम को विवरण पठाउन वा दर्ता फाइलहरू.
1इमेल द्वारा सदस्यता xBet
नाइजेरिया फोन नम्बर क्षेत्रमा आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्
पासवर्ड सिर्जना गर्न र यसको शुद्धता पुष्टि गर्न उपयुक्त क्षेत्रमा दोहोरिनु.
इमेल क्षेत्रमा आफ्नो इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्.
उपयुक्त फील्ड मा आफ्नो पहिलो र थर प्रविष्ट गर्नुहोस्.
को प्रोमो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्.
पुष्टि गर्न reCAPTCHA बटन क्लिक गर्नुहोस don गरिन कि; स्प्याम छ, त्यसपछि बटन बचत क्लिक गर्नुहोस्.
आफ्नो इमेल जाँच, तपाईंको परिचालन खाता बनाउन सक्रियता; त्यसपछि बटन वा लिंक क्लिक इमेल घ गरिन मा.
सामाजिक सञ्जाल मार्फत सदस्यता
बटन सामाजिक सञ्जाल तपाईं बचत गर्न चाहनुहुन्छ नेटवर्क क्लिक.
बनाउन घ गरिन तपाईं दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल खाता जोडिएको हुन.
N गरिन क्लिक गर्नुहोस्; कुनै पनि बटन सामाजिक सञ्जाल वा लिंक गरिन अनुरोध; क्यासिनो 1xbet खेल्न अनुमति.
फोन नम्बर दर्ता
नाइजेरिया फोन नम्बर क्षेत्रमा आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्.
पनि आफ्नो मुद्रा चयन (कि घटना मा, को Naira).
बटन बचत क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं पैसा बचत गरेका जहाँ जानुहोस् र सट्टेबाजी सुरु.
Qu गरिन उनले सट्टेबाजी सीमा छ? तपाईं USD मा खेल्न रुचि भने, wagering एक स्तर देख 0,25 $. 1आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न विभिन्न भुक्तानी विधिहरू स्वीकार xbet.
सी गरिन तपाईं आफ्नो दर्ता 1xbet पूरा गरेको छ. अब तपाईं आफ्नो खाता धन गर्न अगाडि बढ्न सक्छ. तपाईंको बोनस दावी, तपाईंको जम्मा. निम्न खण्ड आवश्यकताहरु बताउँछन्.
पेरिस को एक श्रेणी जहाँ तपाईं पेरिस गर्न सक्नुहुन्छ
1xbet गर्न दर्ता जब तपाईं पेरिस राख्न सक्छन् यहाँ उपलब्ध पेरिस को मुख्य विभाग को द्रुत सारांश.
1xBet भर्चुअल खेल
कसले मन ती आफ्नो पेरिस लागि तत्काल परिणाम प्राप्त गर्न, राम्रो समाचार 1xbet भर्चुअल संसारमा वर्ग खेल तपाईं ठाँउ पेरिस गर्न शर्त र छोटो समयमा परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने प्रदान गर्दछ छ.
योजना अनुसार, तपाईं 1xbet मा खेल पेरिस गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ लगभग हो 100 विभिन्न खेल तपाईं मंच प्रयोग पेरिस गर्न सक्नुहुन्छ. फुटबल पूल, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ हरेक खेल एकदम छलफल गर्दै.